ओली हटाउन खोज्ने नेतालाई चीनको कडा चेतावनी, माओवादीमा खैलाबैला
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सक्रिय भएर लागेको छ ।त्यसमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिने संकेत देखाएको छ । यद्यपी तत्कालै सरकार छाड्ने पक्षमा भने माओवादीले निर्णय गरिसकेको छैन् ।
तर, माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरु नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न दिनरात खटिरहेका छन् भने आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतामाथि पनि दबाब दिइरहेका छन् । ती नेताहरुले छिमेकी राष्ट्रसँग पनि समन्वय गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यस खेलमा भारतले सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको छ । किनकि यसअघि पनि सरकार ढाल्ने पुरै योजना भारतमा नै बनेको थियो । तर, उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्तमान सरकार ढाल्ने विषयमा माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले छलफल गर्दा चिनियाँ अधिकारीले उल्टै कडा चेतावनी दिएका छन् ।
माओवादी नेता महरालाई के भने चिनियाँ अधिकारीले ?
स्रोतका अुनसार सत्ता समिकरण बदल्न सक्रिय चतुर खेलाडी एवं माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले विशेष चिनियाँ प्रतिनिधिहरुसँग शनिबार राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा तीन घण्टा लामो गोप्य छलफल गरेका थिए ।
भेटमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरुले महरालाई केपी ओलीको विकल्प नखोज्न सुझाएको बुझिएको छ । उनीहरुले तत्काललाई सरकार परिवर्तन नेपालको लागि ठूलो अभिशाप हुने चेतावनी दिँदै सोही अनुरुप कदम चाल्न माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरे ।
चीनसँग खास सम्बन्ध राख्ने नेताको रुपमा परिचित महरालाई चिनियाँ पक्षबाटै त्यस्तो निर्देशन भएपछि उनी अहिले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको स्रोतको दावी छ ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिरहेको अवस्थामा चीनले तत्काललाई प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएपछि माओवादी केन्द्रमा यतिवेला खैलाबैला मच्चिएको छ ।
ओली सरकारको पक्षमा किन उभियो चीन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि चीन नेपालसँग नजिकिएको हो । उक्त भ्रमणका बेला पारवाहनदेखि लिएर रेल निर्माणसम्म महत्वपूर्ण सम्झौता चीन र नेपालबीच भयो । ती सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि चीन ओली सरकार रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ । र नेपाल समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ । चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश मास्के भन्छन्– नेपालमा चीनले राजनीतिक स्थीरता र समृद्धि चाँहेको छ ।
मास्केको भनाई अनुसार समृद्ध नेपालको नारा अहिले ओलीले दिएका छन् । विकासका योजना अघि सारेका छन् । जसकारण चीन वर्तमान सरकार हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ ।